Mitantana ny aretin-koditra | Reef Resilience
Mitantana ny aretin-kozatra
Io vatohara io, voan'ny aretin-koditra fotsy, dia hita tao amin'ny vatohara maranitra tsy lavitra teo akaikin'ny nosy Hsiaoliuchou (nosy kely any atsimo-andrefan'i Taïwan). Ny drafitry ny valim-panadinana haingana dia tokony hanasongadina ny fihetsika tokony hatao rehefa miseho ny aretina. Sary © Konstantin Tkachenko
Mipoitra ny aretina dia mety hampidi-doza ny haran-dranomasina, ka mahatonga fahafatesana ho an'ireo vatohara mafy sy malefaka amin'ny faritra maro. Ireo manampahaizana manoloana ny fipoahan'ny aretin'ny vatohara dia mety haniry haminavina sy hampitana ny fiantraikany momba ny tontolo iainana, hanatsarana ny fiantraikany ary hahatakatra ny fisian'ny aretina mitrandraka ny fitantanana maharitra ny harafesin'ny haran-dranomasina.
Ny drafitry ny valanaretina momba ny haran-dranomasina dia manoritsoritra ny dingana hahitana ny valiny, ny fanombantombanana, ary ny famaliana amin'ny fipoahan'ny aretina. Satria ny aretina spread dia farafaharatsiny miankina amin'ny fifindran'ny, ireo mpitantana dia mety manana safidy hiditra mivantana miaraka amin'ny tanjona hampihenana ny fahasarotana na ny fiantraikan'ny fiantraikany amin'ny fanaraha-maso ny asa izay mampitombo ny fiatrehana ny aretina. Mety hiparitaka be ny aretina amin'ny alàlan'ny fambolena harena an-dranomasina, saingy mety hijanona maharitra volana maromaro ny aretina. Midika izany fa manara-maso ny aretina Ny valiny dia mety ilaina ny hanohanana mandritra ny volana maro na taona maro.
Tahaka ny drafitry ny valim-bolo, ny karazana sy ny haben'ny planina dia mety tsy miova arakaraka ny toerana misy anao sy ny fahaizanao. Ny fanekena sy ny famantarana ny aretina amin'ny vatohara dia manakiana ny valin'ny fitsaboana mahomby, ary amin'ny toerana maro dia mila miankina amin'ny fahaiza-manaon'ny manam-pahaizana manokana ny orinasa mpitrandraka haran-dranomasina, na afaka manangana fandaharanasa hananganana fahaiza-manao ao amin'io faritra io. Soa ihany, misy mpitarika sy fitaovana tena tsara ref mba hanampy amin'ny famantarana sy fitantanana ny aretin'ny vatohara.
Famolavolana drafitry ny valin'ny fitsaboana
Aretin-koditra Brown ao amin'ny Acropora spp. Sary © Andrew Bruckner
Ny fikarakarana alohan'ny fipoahan'ny aretina dia ahafahan'ny mpitantana mamaly haingana rehefa voalazan'ny famantarana voalohany amin'ny fipoahan'ny aretina. Tena zava-dehibe ny handroso mialoha ny asa, ny famatsiam-bola, ny fifandraisana ary ny fanaraha-maso. Ny fananana drafitra eo amin'ny toerany dia hanampy ny mpitantana hahazo ny fahamendrehana sy ny fanohanana ara-politika amin'ny mpampiasa reefatra sy ny mpanapa-kevitra. Rehefa manamboatra drafitry ny valin'ny aretina dia zava-dehibe ny mampiditra ireo mpandray anjara manan-danja sy ireo mpiara-miasa, ary koa ireo mpiandraikitra ambony ao anatin'ny fikambanana. Ny famaritana mazava tsara ny andraikitra sy ny andraikitr'ireo fikambanana sy olona rehetra mandray anjara amin'ny valinteny dia manan-danja amin'ny fahombiazan'ny drafitra iray.
Ireto misy ohatra sasantsasany amin'ireo drafitra momba ny valin'ny fitsaboana amin'ny haran-dranomasina, ary koa ireo drafitry ny valim-panontaniana hafa izay miteraka loza maro, anisan'izany ny aretina mikraoba. Ny mpikarakara dia mety hihevitra ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpahay siansa manan-danja mba hampivelatra ny fahasimban'ny fahasimban'ny aretina, toy ny iray misokatra amin'ny varavarankely vaovaonohavaozina ho an'ny Great Barrier Reef.
Valin'ny fitantanana ny fahasimban'ny aretina
Ny toetoetran'ny aretin'ny vatohara dia manondro fa mety mety hampihena ny mety hisian'ny fipoahana, na hampihenana ny habetsaky ny fipoahana, amin'ny alàlan'ny fitsaboana mivantana. Zava-dehibe ny mamaritra ny fepetra ambaratonga fototra (izany hoe inona no hita matetika, ary amin'ny ambaratonga inona, ao amin'ny fiaraha-monina coral). Indray mandeha ny mpitantana no mamaritra ny fepetra "fototra", dia azo atao ny fanombanana ny momba ny toetr'andro sy ny mety ho fampiatoana ny aina. ref Jereo ireo sary etsy ambany ho an'ny antsipirihany momba ny teknikam-pampianarana sy ny paikady ampiasain'ireo mpitantana. Ny valinteny fitantanana hafa dia natolotra, saingy ny ankamaroany dia mitaky fikarohana sy fikarohana fanampiny mba hamaritana ny fahombiazany sy ny fahombiazany.
Hetsika hafa hanohana
Mitadiava torohevitra momba ny fanaraha-maso
Ny hetsika fitantanana mivantana ny fanalefahana ny aretina dia mety ho azo atao amin'ny trangana aretina vitsivitsy.ref Ohatra, nisy fahombiazana teo amin'ny fanaraha-maso ny fielezan'ny aretin'ny tarika mainty nandritra ny fanamafisana ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanangonana ny tarika mampiasa sifotra na pumping lehibe. Ny tapa-tavoahangy na potipoti-basy eny ambony rano dia azo apetraka mivantana avy eo amin'ny tarika ref mba hanakanana ny fivoaran'ny cyanobacterial sisa tavela ao amin'ny taolam-paty amoron'ny vatohara. Ity teknika ity koa dia nahomby tamim-pahombiazana tamin'ny aretina mavo, fotsy fotsy ary aretina fotsy. Raha tokony hampiharina io fomba fiasa io, dia tokony hatao amim-pitandremana izany mba hisorohana ny fanaparitahana cyanobacteria sy micro micro-organismes hafa avy amin'ny haran-koditra malemy amin'ny manodidina ny vatohara manodidina.ref Ny fanesorana sivily ny ampahany amin'ny aretina dia nampiasaina tsara ihany koa mba "hitondrany" ny areti-nify.
Ireo manampahefana dia nanakana ny fidirana amin'ny tranokala misy aretina avo lenta amin'ny tanjona hampihenana ny mety hisian'ny fifindran'ny divizera amin'ny toerana tsy misy toerana. Tetikady hafa dia misy Manara-maso ny antony mahatonga ny aretin'ny vatohara toy ny famitahana sy ny kalitaon'ny rano. ref Mandritra ny hetsika aretina, ny tompon'andraikitra dia afaka mametra ny fandaniana trondro voajanahary mba ahafahan'ny algoly algônina mihazona ny voniny. ref Ny fepetra fitantanana manokana izay miompana amin'ny adihevitra momba ny haran-dranomasina dia mila ampiharina, toy ny fepetra fitsaboana. Ny fepetra toy izany dia ahitana ny fikarakarana ny haran-dranomasina mahatsiravina, ny fihenan'ny hetsika eo anelanelan'ny taolam-biby, ary ny fialana amin'ny toerana tsy voan'ny aretina amin'ny toerana voan'ny aretina. ref Ny tetikady voatokana hanamaivanana ny fahasimbana amin'ny aretina dia ny famongorana ny karazan-tsakafo, ny fisorohana ny voan'ny aretina, ny fanesorana ny faritra malemy, ny fampiasana kitapo na sarontava mba handrakofana ireo faritra marary amin'ny haran-dranomasina, ary ny fampiasana gilasy antibiôtika amin'ny marary malemy. ref Satria ny mpahay siansa dia mianatra bebe kokoa momba ny ny antony sy ny fomba fandefasana ny aretin'ny vatohara, dia hisy ny fanoloran-kevitra fanampiny mba hampihenana ny famindrana aretina sy ny mety ho faty eto an-tany.
Misy ny tambajotran'ny mpahay siansa sy manam-pahaizana manolo-tena sy mahafeno fepetra izay afaka mifandray amin'ny fanampiana, fampahalalana ary toro-hevitra. Ny mpikambana ao amin'ireto fikambanana roa manaraka ireto dia afaka mifandray amin'ny fampahalalam-baovao ary afaka mamaly fanontaniana manokana momba ny areti-mandoza:
Ny aretina sy ny kojakoja momba ny fahasalamana The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Aretina ary Consortium Health (CDHC) dia noforonina ho ezaka fiaraha-miasa mampifandray ireo solontenan'ny masoivohon'i Etazonia mandray anjara amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina. Amin'izao fotoana izao, ny vondrona dia tafiditra amin'ny fanombanana ara-pahasalamana; ny valim-panavotana ao amin'ny US sy ny faritany mifandraika amin'izany; fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny aretina sy ny aretina; Fitsipika Iraisam-pirenena momba ny Pathology Coral; ary ny ezaka fananganana fahaiza-manao izay ahitana ny fampiofanana, ny famindrana teknolojia, ary ny fandrindrana fikarohana ara-drafitra Ny tompon'andraikitra dia afaka mifandray amin'ny CDHC mivantana amin'ny: cdhc.coral@noaa.govmamorona mailaka vaovao, na i Andy Bruckner na Dr. Cheryl Woodley ao NOAA. Jereo ny Appendix 2 ao amin'ny boky momba ny aretina Coral ref ho an'ny fampahalalam-baovao.
Ny Fandaharan'asan'ny Fikarohana momba ny harena an-kibon'ny tany, Ny vondron'orinasa mpitsabo aretin-tsaina (CDWG) dia iray amin'ireo vondrona enina miasa amin'ny fandaharan'asa momba ny tontolo iainana manerantany sy ny World Bank's Coral Reef Targeted Research (CRTR). Ny CDWG dia mitazona fiaraha-miasa ho fanohanana ny fikarohana ny haran-dranomasina ao amin'ny Centre of Excellence Centre of the Centre of the Philippines any Philippines, Tanzania, Australia, ary Mexico ary ireo tsirairay ireo dia afaka manome fampahalalana momba ny fanangonana santionany ary aiza no handefasana santionany. Jereo ny Appendix 2 ao amin'ny Biraon'ny aretina momba ny aretina ref ho an'ny lisitry ny fifandraisana amin'ny faritra ho an'ny manam-pahaizana momba ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamaritana ny fikajiana ny areti-maso Coral
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Aretina sy Consortium Health (CDHC)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Targeted Research & Capacity Development for Management (CRTR) Program